How to Choose Towels manufacturers and suppliers | Bailixin
lamba firakotra bodofotsy
Ahoana no Hifidianana Towels
Miantsena ho an'ny towels dia touchy dingana. Antoka, te-hividy towels izay mahatsiaro ho malemilemy sy mirentirenty, nefa inona no 'gram fanisana' ve Ianao? Ary ahoana no milaza ny maha samy hafa ny Egyptiana Tiorka landihazo sy ny landihazo na haka avy amin'ny avana ny loko sy ny lamina? Alohan'ny hanipy ao amin'ny lamba famaohana ela loatra, haka fotoana hamakiana ny mpitari-dalana mora raisina eto ambany. Izahay efa nanangona sy antokony izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny fomba hanaovana safidy towels ho sokajy dimy manan-danja, avy amin'ny habeny sy ny lanjany ny fanorenana, ka ny fikarohana no handeha araka izay hampandeha tsara araka izay azo atao.
Mamaritra ny Size
Towels tonga ao isan-karazany ny habeny izay ianao te-mandinika eo anoloan'ny fividianana. Ny faneva lamba famaohana fandroana ho an'ny namaoka eny rehefa fandroana na ny fandroana dia 27 "X 52", raha ny fandroana taratasy lehibe kokoa dia kely amin'ny 35 "x 60". Mandro lamba fandrakofana bebe kokoa manome, mamela anao tanteraka mamatotra ny tenanao. Raha toa ianao eo amin'ny mihaza ho an'ny kely safidy, tanana towels dia 16 "x 30", raha joro washcloths dia 13 "X 13".
Manapa-kevitra amin'ny Weight
Bath lamba famaohana hakitroky dia refesina amin'ny grama isaky ny metatra toradroa (GSM), ary io isa miovaova eo anelanelan'ny 300-900. A 300-400 gram lamba famaohana dia thinner sy maivana, ka mahatonga azy io ho ny fanaovana fanatanjahan-tena tsara na ny lakozia. Ireo maina haingana kokoa noho ny mavesatra towels. A 400-600 GSM dia fitaovana mavesatra lamba famaohana izany ho lehibe ny amoron-dranomasina, ary azo ampiasaina toy ny andavanandro towels fandroana. Ary farany, ny GSM 600-900 dia matevina sy absorbent, izay mahatonga azy hahatsapa fanampiny tarehy, fa mitaky fotoana kely kokoa ny paharitry. Miaraka amin'ny towels, tiantsika ny hamely ny tonga lafatra mandanjalanja ny matevina, malefaka sy absorbent, nefa mazava tsara mba ho mora-paharitry.
Fidio ny Cotton
Isan'andro towels Matetika no vita amin'ny landihazo fitsipika. Tiorka landihazo, amin'ny lafiny iray hafa, dia manana kofehy intsony izay manome towels fanampiny mateza sy malefaka mihevitra. Towels vita amin'ny landihazo manana intsony Tiorka, matevina kokoa tadivavarana kofehy izay mitroka be dia be ny hamandoana sy ny hafanana fandrika. Popular ao amin'ny trano fandraisam-bahiny sy ny Spas, dia mavesatra noho ny fitsipika towels sy hitondra intsony ho maina. Mifidiana Tiorka landihazo, raha tianao matevina, mihevitra tarehy. Ihany koa izy ireo ho lasa malemy ary fluffier isaky ny hanasana. Tena hafa absorbent sy mateza safidy? Towels nataon-Zero manova teknolojia. Zavatra tsy mahatsapa zavatra faran'izay malefaka sy malefaka rehefa manome ny fohy paharitry ny fotoana. Zero manova landihazo towels dia maivana, mateza sy mora packable.
Safidio ny niasa na Ringspun Construction
Towels nataon-niasa landihazo dia midika fa ny kofehy dia niasa mba hanala fohy kofehy sy potipoti-javatra, fa namela ny matanjaka indrindra ary lava indrindra kofehy mba ho voarary amin'ny fandroana lamba famaohana. Ity dingana ity no miantoka mateza sy manakana pilling. Ringspun landihazo nataon-kofehy lava sy fohy nampifanintontsintona ny mamorona malama, tsara kokoa raha Terry kofehy lamba nataon-kofehy lehibe kokoa, ary tadivavarana voatenona tamin'ny kofehy fanampiny. Koa, mitady towels nataon-hofehezina izy sisiny hampihenana fraying.
Mifidiana ny Loko sy Style
Towels no mahay manampy ny mafana, vita mikasika ny efitra fandroana, ka diniho fifidianana niisa ao amin'ny lantom-peony mahafinaritra loko na lamina. Safidy iray hafa dia ny boay ny cabinets amin'ny loko miorina amin'ny vanim-potoana (izany hoe, mamirapiratra beachy loko amin'ny lohataona / fahavaratra, mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any loko in latsaka / ririnina). Ny mahazatra indrindra dia malefaka safidy towels fotsy, izay tsy mety lany andro mijery ary miasa amin'ny fomba rehetra na ny toe-javatra.
Notes amin'ny Care
Ny fomba tsara indrindra hanaovana ny towels haharitra intsony dia ny mandray tsara nanompo ireo izy. Alohan'ny mampiasa ny towels, sasao indray mandeha mba hanampy azy ireo hametraka ny loko, hanatsarana absorbency sy hampihenana misy lint. Koa, tsy mampiasa lamba softeners satria afaka miala sisa sy mamorona mafy mihasimba. Amin'ny alalan'ny fametrahana ny kely fotoana sy hery any an-fifantenana dingana, ianao mahita towels izay samy hametraka fomba sy fampiononana ny efitra fandroana.
Post fotoana: Jul-31-2018
miantso avaratr'i Xiaoyi River, pitaovana Industrial Zone, Hongrun Street, Gaoyang County, Baoding, Hebei, Shina (Tanibe)